မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် ထင်ရှားစွာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း သုံးခွမြို့နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ဗိုလ်သန်းကြွယ်၊ သခင်သန်းကြွယ်၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် (ပင်လုံစာချုပ်) အမည် ဖြင့်ထင်ရှားသည်။
မြေပိုင်ရှင်သူဌေး အဖဦးစိန်၊ အမိ ဒေါ်စိန်﻿ကျော့ တို့မှ ၁၉၂၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့ သုံးခွမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း တွင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဗမာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သည်။မွေးချင်းမောင်နှမ ၇ ဦး (ဦးမောင်မောင်၊ သခင် သိန်းထွန်း (ဗိုလ်သိန်းထွန်း)၊ ဒေါ်ညွန့်ခင်၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်၊ ဦးမျိုးမြင့်၊ ဦးမျိုးသန့် နှင့် ဦးတင်ထွဋ်) တို့တွင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် စတုတ္ထ ဖြစ်သည်။ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဝံသာနု အမျိုးသားရေးခေတ်တွင် ငွေအားလူအားဖြင့် ပါဝင်ခဲ့သော ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက် စောင်းတန်း အလှူရှင်သူဌေးကြီး ဦးဘကျော်၊ ဦးဘရှင်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား (ဦး) ဘမြင့်၊ ဒေါ်သန်းခင်၊ ဒေါ်သန်းရင်တို့၏တူဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း နှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုခေတ်၁၉၄၆ မှ ၁၉၄၈တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့မကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ရန်ကုန်ခရိုင် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သံမဏိတပ်နှင့် မြို့မရဲခေါင်တပ်ဖွဲ့တွင် ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးမှာမြို့မ ဦးဘလွင် ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်စတင်တည်ထောင်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အမျိုးသားကျောင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းတွင် လွန်စွာထင်ရှား၏။ ကလေးအရွယ်မှသည် သက်ဆုံးတိုင်အချိန်အထိ အရက်သေစာ အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူ (Teetotaler) တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ(တကသ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗဟိန်း နှင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (တကသ) အတွင်းရေးမှူး ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဗိုလ်အောင်ကျော် စသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံ (၁၉၃၈ - ၃၉) ကျောင်းသားသပိတ်တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။
မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်၏ နိုင်‌ငံရေးဘဝသည် ဟံသာဝတီခရိုင် သုံးခွမြို့ အာရှလူငယ် အစည်းအရုံး ပြန်ကြားရေးမှူးနှင့်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်‌ကို ရယူခဲ့ချိန် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် (၁၉၃၉ - ၁၉၄၅) ကာလ မှ စတင်‌ခဲ့သည်‌။ စာရိတ္တ‌ကောင်းမွန်ပြီး တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်ဓာတ်၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်၊ ပရဟိတလုပ်ငန်း‌ဆောင်ရွက်လို‌သော စိတ်ဓာတ်‌ တောင့်တင်းခိုင်မာလာ‌အောင် စည်းရုံးလျက် တိုင်းပြည်အတွက် လူ‌တော်လူ‌ကောင်း လုပ်သားကောင်းများပေါ်ထွက်လာ‌စေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် (ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း) အာရှလူငယ်အစည်းအရုံးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ပုဂံ ဦးဘဂျမ်း၊ ဦးကျော်မြင့်ကလေး၊ ဦးဇော်ဝိတ်၊ သခင်ခင်အောင်၊ သခင်ညီလေး စသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အတူလူငယ်များ ဗလငါးတန်ပြည့်ဝရေး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးလျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းများကို အများအပြား လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဂျပန်ခေတ် အာရှလူငယ်အစည်းအရုံးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ကျောင်းသားလူငယ်များသာမက ဒေါက်တာရီရီလှ (စာရေးဆရာမကြီးယုဝတီခင်ဦး) စသော ကျောင်းသူလေးများသည်လည်း တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် (၁၉၃၉ - ၁၉၄၅) ဂျပန်ခေတ်တွင် ရန်ကုန်ခရိုင်နှင့် ဟံသာဝတီခရိုင်တို့ တွင် ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်၊ ပုဂံ ဦးဘဂျမ်း တို့နှင့်အတူ ပညာရေး၊ သမိုင်း၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် နှင့် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု အမျိုးသားရေး စာပေများပို့ချခဲ့သည်။ ကျောင်းအုပ်အဖြစ် ဦးဆောင်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ကျောင်းသားလူငယ်များအား ပညာရေးကိုသာမက မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်ကိုပါသွတ်သွင်းပေးလေ့ရှိသည်။ ဂျပန်ခေတ် တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိလူငယ်များအား သိုင်းဆရာကြီး ဦးပြည်သိမ်း နှင့် သိုင်းဆရာကြီးဦးချစ်သန်း တို့နှင့်အတူ မြန်မာ့သိုင်းပညာ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မြန်မာ့သိုင်းဟုခေါ်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် အတတ်ပညာသည် မြန်မာတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ကိုယ်ခံပညာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးမြန်မာတို့က ကာယနှင့် စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ရေးအတွက် အဓိကထားပြီး စစ်ပွဲများတွင် လက်နက်မဲ့၊ လက်နက်ကိုင်နှစ်မျိုးခွဲကာ အသုံးပြု တိုက်ပွဲဝင်သည့် ရိုးရာကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်။ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ လမ်း (၅၀) ရှိ သူ၏၂ ထပ် နေအိမ်နှင့် ခြံဝင်းထဲတွင် လူမျိုးဘာသာမရွေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ ကျောင်းသားလူငယ်များအား အခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် ကျွေးမွေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ လူတိုင်းအပေါ်စေတနာထားတတ်သူဖြစ်၍ လူအများ၏ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုခံရသူဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးစီးသည့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ကြီးသည် ၁၉၄၂ခုနှစ်စတွင် ဂျပန်အင်ပီးရီးယယ် တပ်မတော်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သုံးကြောင်း ဖြန့်ကာ ယိုးဒယား မြန်မာနယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်၍ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ရေး၊ မြိတ်၊ ထားဝယ်နှင့် မော်လမြိုင်မြို့တို့ကို အပြီးအပိုင်စီးနိုင် သိမ်းနိုင်သည်။ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် ဂျပန်ခေတ် အာရှလူငယ်အစည်းအရုံး ပြန်ကြားရေးမှူး နှင့် ဘီအိုင်အေ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် နိုင်ငံရေးမှူး နှင့်စည်းရုံးရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွင် နယ်ချဲ့တို့၏ ဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးကြားမှ စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဂျစ်ကား အမှတ် -/၇၅၅ ကိုတော်လှန်ရေးကာလ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလစစ်ဆင်ရေးများတွင် အသုံးပြုစေခဲ့သည်။ 
ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ ဆန့်ကျင်ရေးအသင်းကြီးဖြစ်သည့် တို့ဗမာအစည်းအရုံး သုံးခွမြို့ ဥက္ကဋ္ဌ အစ်ကို ဖြစ်သူ သခင်သိန်းထွန်း(ဗိုလ်သိန်းထွန်း)နှင့် အတူ သခင် သန်းကြွယ်အမည်ဖြင့် တို့ဗမာအစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင်၊ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (ဖဆပလ) အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု လှုပ်ရှားမှု ခေတ်အတွင်း အစ်ကို ဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်၊ သခင်သိန်းထွန်း(ဗိုလ်သိန်းထွန်း)၊ ညီဖြစ်သူ ဗိုလ်မျိုးမြင့် နှင့် ဗိုလ်မျိုးသန့် တို့ကလည်း မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် နှင့်အတူ စွန့်စွန့်စားစား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့၏။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ကို စတင် တော်လှန်ကြကုန်သည်။
မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (ဗကသ) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ထင်ရှားသော မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု လှုပ်ရှားမှု ခေတ်အတွင်း ဗကသ၊ မကသ (မြို့မကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ) ၊ ရကသ (ရန်ကုန်ခရိုင် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ)၊ တကသ (တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ) များက ဦးဆောင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ သူရိယဦးသန်းမောင်၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း စသော ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များသာမက ပြည်ခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင် ဦးစိုးမင်း (နောင်အခါ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန်းဦး) စသော နယ်အသီးသီးမှကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များသည်လည်း အထူးတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်ရန်နှင့် ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေး များကို စုပေါင်း တောင်းဆိုရန် ဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီစနစ် Colonialism နှင့် ကိုလိုနီခေတ် ပညာရေးcolonial education ကို တိုက်ဖျက်ပြီး သခင် ပညာရေး စနစ် ထူထောင်ရန်လည်း ချမှတ် ထားသည်။ နယ်ချဲ့စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပါသည်။ ထို ရည်ရွယ်ချက် များကို တနိုင်ငံလုံးမှ ကျောင်းသားများ စုပေါင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် ဗကသမှ ကြီးမှူး၍ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ ထူထောင်ပေးခဲ့သည်။ ဗကသနှင့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ များက ဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်းတွင်နှစ်စဉ် အမျိုးသားနေ့ အောင်ပွဲ နေ့များကို ကျင်းပ ကြသည်။ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု လှုပ်ရှားမှု ခေတ် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုကာလ (၁၉၄၁–၁၉၄၇) အတွင်း ထင်ရှားခဲ့ကြ﻿သော ဗကသ ခေါင်းဆောင်၊ တကသခေါင်းဆောင်များတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးဗဟိန်း၊ ဦးဗဆွေ၊ ဦးနု၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်၊ သူရိယ ဦးသန်းမောင်၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ အာဏာရှင်လှရွှေ၊ လင်းယုန်နီ၊ လင်းယုန်မောင်မောင်၊ ဦးရန်ဝေး၊ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကျော်၊ ဦးစိန်လှ စသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ ပါဝင်သည်။ စစ်ပြီးခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးတပ်ဦးကြီးသဖွယ် နိုင်ငံတွင်းသာမဟုတ် ကမ္ဘာတလွှား၌ပင် ထင်ရှားခဲ့သော အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (ဖဆပလ) ဖြစ်သည်။ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (ဖဆပလ) တွင် ၁၉၄၂ မှ ၁၉၄၈ အထိ အဖွဲ့ဝင် နှင့် ဗဟိုအမှုဆောင်ကော်မတီဝင် အဖြစ် ဦးဆောင် တာဝန်ယူပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ် အထွေထွေသပိတ်ကြီး (1946 General Strike of Burma) တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သပိတ်မှောက်ကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၆ ခုနှစ် အထွေထွေ သပိတ်တွင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားထု တစ်ရပ်လုံးအား ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ဝန်ကြီးများရုံး အပြင်ဘက်တွင် သာမက ဝန်ကြီးများရုံး(အတွင်းဝန်ရုံး) အတွင်းဝင်၍ ဦးဆောင်ဆန္ဒပြ ရဲရဲတောက် အရေးဆိုခဲ့သည်။ လင်းယုန်မောင်မောင်၊ သူရိယ ဦးသန်းမောင်၊ ဦးသာထွန်း (ရှေ့နေချုပ်)၊ ဦးသန်းဆွေ (သံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေ)၊ ဦးမျိုးမြင့် (မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် ၏ညီ၊ O.T.S အပတ်စဉ် ၈၊ လူထု ပညာရေးမှူး)၊ ဦးမျိုးသန့် (မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်၏ညီ၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု အစိုးရ၏ သတင်း ပြန်ကြားရေးမှူး၊ မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဘီအိုစီ)၊ ဦးခင်မောင်စုမောင် (ဝန်ကြီးများရုံးအထူးအရာရှိ)၊ ဦးရဲမြင့် (ဗိုလ်ကြီးရဲမြင့်အောင်)၊ ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (သမိုင်းပါမောက္ခ)၊ ဦးညွန့်လွင် (ဗိုလ်မှူးညွန့်လွင်)၊ သံမဏိ ဦးကျင်လှိုင် (ဆောက်လုပ်ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး)၊ ဦးရန်ဝေး၊ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကျော်၊ ဦးစိန်လှ၊ ဦးရွှေတင် (ရေကြောင်းသိပ္ပံကျောင်းအုပ်ကြီး Captain ရွှေတင်)၊ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး (စာရေးဆရာခင်မောင်အေး (မန္တလေး)) စသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် များသည်လည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထွေထွေ သပိတ်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဗြိတိသျှဘုရင်ခံအသစ် ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ် (Major General Sir Hubert Rance) ရောက်ရှိပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးအေး၊ ဦးစိုးရှိန်၊ ဦးဝမ်းမောင်၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်၊ စာတိုက်ဦးထွန်းတို့ ခေါင်းဆောင်သည့် (ပုလိပ်သပိတ်၊ ကျောင်းသားသပိတ်၊ စာတိုက်အလုပ်သမားများ သပိတ်၊ သမဂ္ဂပေါင်းစုံသပိတ်) အထွေထွေသပိတ်များဖြင့် သပိတ်တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကြီးတစ်ခုလုံး ရပ်ဆိုင်းလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ အထွေထွေသပိတ်ကြောင့် ဆာပေါ်ထွန်းခေါင်းဆောင်သော ရုပ်သေးအစိုးရ ပြုတ်ကျခဲ့သည်။ ဘုရင်ခံဆာဟူးဘတ်ရန့်စ် က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဘုရင်ခံအလုပ်အမှုဆောင်(ဝန်ကြီး) အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်သော မျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုလ်များ ဘုရင်ခံ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်နိုင်ခဲ့သည်။ အရှေ့တောင်အာရှအတွက် မဟာမိတ် စစ်သေနာပတိ ဗိုလ်ချုပ် လော့မောင့် ဗက်တန် ကပင် ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးသည် ဂျပန်ကို တော်လှန်သော အင်အားစုမျှသာမက အမျိုးသားတပ်ဦးကြီးတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေကြောင်း ယင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များသည် မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်၍ ထထကြွကြွဆောင်ရွက်နိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ဖဆပလမှ ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်း လန်ဒန်မြို့ ရှိ မဟာမိတ်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့သို့ အကြံပေးခဲ့သည်အထိ ဖဆပလ ၏ ဂုဏ်သတင်းသည် ပျံ့သင်းကျော်စောခဲ့သည်။
မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် ၁၉၄၆ မှ ၁၉၄၈ အထိ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလတွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ရန်ကုန်ခရိုင် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် မြို့မကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တစ်ဦး လည်းဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ဗိုလ်သန်းကြွယ်၊ သခင်သန်းကြွယ်၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် (ပင်လုံစာချုပ်) အမည် ဖြင့်ထင်ရှားသည်။ ၁၉၄၇ ခုနစ်တွင် မူလတန်းပညာ မသင်မနေရ ဥပဒေ နှင့် အခမဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ပညာရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းနှင့် အတူ စတင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၊ ဆာမောင်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၊ ဦးအောင်ဇံဝေ၊ ဦးတင်ထွဋ်(အိုင်စီအက်စ်)၊ ဗိုလ် ခင်မောင်ကလေး၊ သခင်ဝတင် နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် အတူ ပင်လုံညီလာခံ တွင်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုနေ့သည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းတွင် အရေးပါ အရာရောက်သော နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် လူကြီး၊သက်ကြီးတက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် လူကြီး၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရေးရာ ဌာနမှူး၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လူကြီး၊လူငယ် နှင့် ကျောင်းသားလူငယ်ရေးရာ ဌာနမှူး၊  မြို့မကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် လူကြီးနှင့်သုံးခွမြို့နယ် အသင်းနာယကကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးနု၊ စဝ်ရွှေသိုက်၊ (နိုင်ငံတော်သမ္မတ)၊ ဦးဗဆွေ၊ ဗိုလ်လက်ျာ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးကျော်မြင့်ကလေး ၊ သခင်ကျော်ထွန်း ၊ သံမဏိ ဗိုလ်ခင်မောင်၊ ဗိုလ်ခင်မောင်ကလေး၊ သခင်ပန်းမြိုင်၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်း၊ ဗိုလ်မင်းခေါင် ၊ သခင်လှမောင် (ဗိုလ်ဇေယျ) ၊ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး (သခင်အောင်ကြီး) တို့နှင့်အတူ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွင် စွန့်စွန့်စားစား ပါဝင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့သည် အာဇာနည်နေ့ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် အထိ ရောက်ဆုံး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံး၏ ယုံကြည် ကိုးစား အားထားခြင်းခံရသူ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ ၊ ဒီးဒုတ် ဦးဘချို၊ ဦးရာဇတ်၊ ဦးဘဝင်း၊ မန်းဘခိုင်၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး စဝ်စံထွန်းတို့သည် တိုင်းပြည်၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိနေစဉ် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အောင်မြင်မှု ကို မနာလိုဝန်တိုဖြစ်လျက်ရှိကြသော လူမသမာတစ်စု ၏ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရလေသည်။ ထိုအာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့နှင့်အတူ တိုင်းပြည်၏ တာဝန်ဝတ်တရားနှင့် အမှုကိစ္စတို့ကို သစ္စာရှိစွာ ထမ်းရွက်နေ သော အတွင်းဝန် ဦးအုန်းမောင်နှင့် ကိုယ်ရံတော် မောင်ထွေး တို့လည်း ကျဆုံးခဲ့ရလေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှူး ပြုသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက်တစ်နေ့ ၁၉၄၇၊ ဇူလိုင် ၂၀ တွင်ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားအနီးရှိ ဖိုက်စကွဲယား (ယခု) မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံ၌ နိုင်ငံတော်ဈာပနဗဟိုကော်မတီဝင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည် ကျောင်းသားနှင့်ပြည်သူတစ်သိန်းကျော်ကိုဦးဆောင်ပြီး "လူသတ်ဝါဒရှုတ်ချပွဲ" ကို စတင်ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုနေ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံး အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်ကို အာဇာနည်နေ့ အဖြစ် နှစ်စဉ် အခမ်းအနားကျင်းပ ကြသည်။
၁၉၉၅ ဇူလိုင်လ စာပေဂျာနယ်၊ အတွဲ၂၊ အမှတ် ၁၁၊ ဆရာမ ခင်နှင်းဦး ရေးသား ပြုစုခဲ့သော ပထမဦးဆုံး အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား စာမျက်နှာ (၄၈)
၁၉၉၅ ဇူလိုင်လ စာပေဂျာနယ်၊ အတွဲ၂၊ အမှတ် ၁၁၊ ဆရာမ ခင်နှင်းဦး ရေးသား ပြုစုခဲ့သော ပထမဦးဆုံး အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား စာမျက်နှာ (၄၉)
၁၉၉၅ ဇူလိုင်လ စာပေဂျာနယ်၊ အတွဲ၂၊ အမှတ် ၁၁၊ ဆရာမ ခင်နှင်းဦး ရေးသား ပြုစုခဲ့သော ပထမဦးဆုံး အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား စာမျက်နှာ (၅၀)
နိုင်ငံတော် စီးပွားကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (စပကသ) ဌာနချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ ( ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး) အဖြစ် ၁၉၄၈ခုနှစ် မှ ၁၉၆၃ခုနှစ် အထိ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် မြူနီစီပယ်လူကြီး နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော် မြူနီစီပယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ Rangoon Municipal Committee ဌာနမှူး၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားများအစည်းအရုံး (ဗတလစ) ဌာနချုပ်၊ ရန်ကုန်ခရိုင် နှင့် ဟံသာဝတီခရိုင်တို့ တွင် ဦးစီး ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်The Anti-Fascist People's Freedom League (ဖဆပလ) တွင် ၁၉၄၂ခုနှစ် မှ ၁၉၄၈ခုနှစ် အထိ အဖွဲ့ဝင်၊ ဗဟိုဦးစီး ကော်မတီဝင် နှင့် ဖဆပလဌာနချုပ် ဗဟိုအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရ က ပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့ရာတွင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ဧက (၈၀၀) ကျော် ပြည်သူပိုင် အသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
၁၈.ဇူလိုင်လ.၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ကရိလမ်း(ဗိုလ်မြတ်ထွန်း လမ်း) နေ ဟင်္သာတမြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဥက္ကလာဦး စေတီဘုရားတကာ ဦးဘဦး နှင့် ပေါင်းတည်မြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်လှ (ပန်းကန်စက်ဦးသော် ၏ညီမအရင်း) တို့၏သမီးဖြစ်သူ မြို့မကျောင်းသူဟောင်း ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း (ခေါ်) ဒေါ်အမာ နှင့် ထိမ်းမြှားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးကိုင်းရှိုင်း သော အမျိုးသမီးကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ဆွေကြီးမျိုးကြီးဖြစ်သော်လည်း မည်သူ့ကိုမျှ မောက်ကြွားဝင့်ဝါခြင်းမရှိ၊ မာန်မာနထားခြင်းမရှိ၊ ခြိုးခြံစွာကျင့်သုံးနေထိုင်၍ လှူသင့်လှူထိုက် ပေးသင့်ပေးထိုက်သူအား ရက်ရောစွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတတ်သည်။ လူကြီး-လူငယ်မရွေး၊ ဆင်းရဲ-ချမ်းသာမရွေး၊ လူမျိုး-ဘာသာမရွေး လူအားလုံးကို မေတ္တာစိတ်ဖြင့် လှိုက်လှဲပျူငှာစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ အဆုံးအမ တရားတော်တို့ကို ပုံပြင်ဝတ္တုများဖြင့် သားသမီးများကိုသာမက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ လူငယ်များအား မကြာခဏ ရှင်းလင်းပြောပြလေ့ရှိသည်။ ဘာသာရေးသာမက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ များ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် မြင့်မားရေးဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဝတ္တရားများ၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ သည်းခံခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်းသင်ပြလေ့ ရှိသည်။ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားကို ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ခန့်မှ ကွယ်လွန်ချိန်၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ထိ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ကျင့်ကြံအားထုတ်လျက်သော ဝိပဿနာယောဂီ ဖြစ်သည်။
မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူအဖြစ် နာမည်ကောင်း ရှိသည်။ ဆဋ္ဌမအကြိမ် သင်္ဂါယနာ ပွဲ အတွက် ကမ္ဘာအေးစေတီနှင့် မဟာပါသဏလိုဏ်ဂူတော်တို့ကို တည်ဆောက် ရာတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့်အတူ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ( ၃) နှစ် တိတိ အဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် အသက်သတ်လွတ်စားခဲ့သည်။ ၁၉၅၄-၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဆဋ္ဌမအကြိမ်သင်္ဂါယနာတင်ခြင်းကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ ရာတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့်အတူ ပါဝင် ဦးဆောင် ခဲ့သည်။ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရား ပြုပြင်ခဲ့ ရာတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဆာဦးသွင်နှင့်အတူ ပါဝင် ဦးဆောင် ခဲ့သည်။ ဦးဗဆွေ ဦးစီး တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့သော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ရန်မျိုးအောင်စေတီ တည်ဆောက်ရေး နှင့် ထီးတော် တင်လှူရေးတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဗဆွေ နှင့်အတူ ပါဝင် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် (ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (ဖဆပလ) ဗဟိုဦးစီး ကော်မတီဝင် နှင့်ဗဟိုအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်)၏ဓာတ်ပုံ
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ သမဂ္ဂဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ရန်ကုန်ခရိုင် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်မြို့မကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ
နယ်ချဲ့ဆန်ကျင်ရေး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ပါဝင်ဦးဆောင်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသားလူငယ် ခေါင်းဆောင်များအား ကမ္ဘာ့ကျောင်းသားလူငယ် အဖွဲ့ချုပ်က အသိအမှတ်ပြု လာရောက် တွေ့ဆုံစဉ် (၁၉၄၇ ခုနှစ်)
ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း (Professor Dr. Than Tun) ရေးသားခဲ့သော "ငါပြောချင်သမျှ ငါ့အကြောင်း" စာအုပ်၏ စာမျက်နှာ ၁၃
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးများ စာအုပ်
↑ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း ၁၉၉၅. မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်ခင်ဆွေ။
↑ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း ၁၉၉၆. မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်ခင်ဆွေ။
↑ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း ၁၉၉၃-၂၀၀၀. မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်ခင်ဆွေ။
↑ Template:Ciet web
↑ ၇.၀ ၇.၁ နိုင်ငံတော်, အစိုးရ (၁၉၇၂). ပင်လုံညီလာခံ သမိုင်းစဉ် အကျဉ်း. ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စာပေဗိမာန်, ၁၃၈။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၁၉၈၀ မေမြို့ချစ်ဆွေ ရေးသား ပြုစုခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု လစဉ်မှတ်တမ်း
↑ မြို့မ မဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၂-၂၀၀၃. မဂ္ဂဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်ခင်စန်းမြင့်။
↑ သန်းဝင်းလှိုင် (၂၀၁၆၊ ဩဂုတ်လ). နှစ် ၃၀ဝ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဘိဓာန် (တတိယအုပ်). စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ, စာမျက်နှာ ၃၂၈-၃၂၉။
↑ History of Myanmar
↑ Myanmar : Book Review - Making Enemies: War and State Building in Burma
↑ Myoma U Than Kywe
↑ ၁၉၉၅ ဇူလိုင်လ စာပေဂျာနယ်၊ အတွဲ၂၊ အမှတ် ၁၁၊ ဆရာမ ခင်နှင်းဦး ရေးသား ပြုစုခဲ့သော ပထမဦးဆုံး အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သန်းကြွယ်၊_ဦး_(မြို့မ)&oldid=444021" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၂:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။